ဒီနေ့ ဆယ်တန်းဖြေ ကျောင်းသားတွေတိုင်း နစ်နာသွားခဲ့ရတဲ့ ဓာတုမေးခွန်း - Mingalarday
Home > ပြည်တွင်းသတင်း > ဒီနေ့ ဆယ်တန်းဖြေ ကျောင်းသားတွေတိုင်း နစ်နာသွားခဲ့ရတဲ့ ဓာတုမေးခွန်း
ဆယ်တန်း ဓါတုဗေဒ မေးခွန်းမှာ ပယ်ဖျက်ပြီးသား သင်ခန်းစာထဲကမေးခွန်းတွေ ပါဝင်နေ
ရန်ကုန် မတ် (၁၂)
ဒီနေ့ ဖြေဆိုခဲ့တဲ့ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း စာမေးပွဲ ဓါတုဗေဒ မေးခွန်းက သင်ရိုးညွန်းတမ်းထဲကနေ ပယ်ဖျက်ထားတဲ့ သင်ခန်းစာတွေ ကို ထည့်သွင်းမေးမြန်း ထားတယ်လို့ သင်ကြားရေး ဆရာဆရာမတွေ အများစု က ပြောဆိုကြပါတယ်။
မေးခွန်းနံပါတ် (8) (a) ရဲ့ နံပါတ် (၁) အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက် အနေနဲ့ မေးထားတဲ့ မေးခွန်းက ပယ်ဖျက်ပြီး သင်ခန်းစာထဲက မေးထားတာ ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
“ ပယ်ဖျက်ထားတဲ့ သင်ခန်းစာ ထဲက မေးတယ်ဆိုတာ ကလေးတွေ အတွက် နစ်နာတယ်၊ ပြီးတော့ မေးခွန်း နံပါတ် (8)(a) ရဲ့ နံပါတ် (၂) က ကလေးတွေ အတွက်အရမ်းလွယ်တဲ့ ဟာမျိုးဖြစ်ပေမယ့် အပေါ်က နှစ်မှတ်တန် မရတော့ တခြား ခက်တဲ့ အပုဒ်တွေကို ရွေးဖြေတော့ ကလေးတွေ မှာလည်း နစ်နာမှုတွေ အများကြီးရှိတယ် “ လို့ ဓါတုဗေဒ ဘာသာရပ် ဆရာဦးအောင်အောင် က ပြောပါတယ်။
အခု ၂၀၁၈ ခုနှစ်ရဲ့ ဓါတုဗေဒ မေးခွန်းက ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၄ ခုနှစ် က တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း စာမေးပွဲမှာ ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ မေးခဲ့တဲ့ ဓါတုဗေဒ မေးခွန်း နဲ့ အားလုံးထပ်တူနီးပါး တူညီနေတယ်လို့ လည်း သိရပါတယ်။
အဲဒီလို ၂၀၁၄ ခုနှစ် မှာ မေးခဲ့တဲ့ ဓါတု ဗေဒ မေးခွန်း (ရခိုင်ပြည်နယ်) နဲ့ အားလုံးနီးပါး တူညီမှု ရှိနေတာ နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ဝေဖန်မှုတွေ လည်း ရှိနေပါတယ်။
ဒါ့အပြင် မှား၊ မှန် မေးခွန်းတွေမှာလည်း ပယ်ဖျက်ပြီးသား သင်ခန်းစာတွေထဲကနေ မေးထားတာ မျိုးတွေ ပါဝင်နေတယ်လို့ သိရပါတယ်။
“ ပယ်ပြီးသားသင်ခန်းစာကတော့ လုံးဝ မမေးသင့်ပါဘူး၊ ပြီးတော့ ဒီမေးခွန်းက ၂၀၁၄ ရခိုင်မေးခွန်းနဲ့ လည်း တစ်ထပ်တည်းနီးပါး ဖြစ်နေတယ်၊ တစ်မှတ်တန် (၁) ပုဒ် ချိန်း ထားတယ်၊ (၂) မှတ်တန် တချို့ ချိန်းတယ်၊ (၈) မှတ်တန် မှာ ထုတ်ဖော်ပုံ တစ်ပုဒ် ချိန်းထားတယ် အဲဒါလေးပဲ ကွာတယ်၊ ကျန်တာ အားလုံး တစ်ထပ်တည်း မေးထားတာပါ ၊ ဒါလည်း မဖြစ်သင့်ပါဘူး နိုင်ငံတော် အဆင့် မေးခွန်းကို ဒီလို တစ်ထပ်တည်းကူးထားတာက ရုပ်ဆိုးလွန်းပါတယ် “ လို့ ဓါတုဗေဒ ဘာသာရပ် သီးသန့် စာသင်ဝိုင်း သင်ကြားပေးတဲ့ ဆရာ ဦးသူရအောင် က မှတ်ချက်ပြုပါတယ်။
ဒီနေ့ ဓါတုဗေဒ ဘာသာရပ် ဖြေဆိုပြီးချိန် အထိ မြန်မာ တစ်နိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာအရ ကျောင်းသားကျောင်းသူ ဦးရေ စုစုပေါင်း (၆၉၄၃၇၁) ဦး ရှိတယ် လို့ မြန်မာ နိုင်ငံ စာစစ်ဦးစီးဌာန က ရရှိတဲ့ စာရင်းတွေ အရ သိရပါတယ်။
* ဒီနေ့ဖြေတဲ့ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း ဓာတုဗေဒမေးခွန်းမှာ
No.8(a)(i) ” Titration Curve” , ” Types of titration
curve” Definition (2)မျိုးဟာ သင်ရိုးသစ်မှာ မပါတော့ပါ။
* သင်ရိုးဟောင်းစာအုပ် စာမျက်နှာ (242) (13.7) က ပြဋ္ဌာန်းစာတွေပါ။
* 2014 ရခိုင်ပြည်နယ် မေးခွန်းက No. 8 (a)(i)( ii )
(8)မှတ်ဖိုးလုံး တစ်လုံးမလွဲ ပြန်ရေးပေးလိုက်ခြင်းပါပဲ။
2015 ကစပြီး သင်ရိုးတွေပြင်တယ်ဆိုတာတောင် မသိတဲ့ပါမောက္ခမျိုးပါပဲ။
* ပယ်ထားပြီးသားဖြစ်လို့ သင်ရိုးသစ်စာအုပ်မှာ မမြင်ဖူးတော့ဇဝေဇဝါဖြစ်ပြီး ကလေးက ပိုင်တဲ့ပုစ္ဆာကိုတောင် မဖြေရဲတော့ဘူး။ ကလေးပေါင်းများစွာ နစ်နာပါတယ်။
* တစ်နိုင်ငံလုံးအတွက် အလုပ်လုပ်ရာမှာ ဘာကြောင့် ဒီလောက် ပေါ့ပျက်ပျက်ဖြစ်ရတာပါလဲ??
* ဘယ်သူ့မှာ တာဝန်ရှိပါသလဲ??
ဆယျတနျး ဓါတုဗဒေ မေးခှနျးမှာ ပယျဖကျြပွီးသား သငျခနျးစာထဲကမေးခှနျးတှေ ပါဝငျနေ
ရနျကုနျ မတျ (၁၂)
ဒီနေ့ ဖွဆေိုခဲ့တဲ့ တက်ကသိုလျဝငျတနျး စာမေးပှဲ ဓါတုဗဒေ မေးခှနျးက သငျရိုးညှနျးတမျးထဲကနေ ပယျဖကျြထားတဲ့ သငျခနျးစာတှေ ကို ထညျ့သှငျးမေးမွနျး ထားတယျလို့ သငျကွားရေး ဆရာဆရာမတှေ အမြားစု က ပွောဆိုကွပါတယျ။
မေးခှနျးနံပါတျ (8) (a) ရဲ့ နံပါတျ (၁) အဓိပ်ပာယျဖှငျ့ဆိုခကျြ အနနေဲ့ မေးထားတဲ့ မေးခှနျးက ပယျဖကျြပွီး သငျခနျးစာထဲက မေးထားတာ ဖွဈတယျလို့ ဆိုပါတယျ။
“ ပယျဖကျြထားတဲ့ သငျခနျးစာ ထဲက မေးတယျဆိုတာ ကလေးတှေ အတှကျ နဈနာတယျ၊ ပွီးတော့ မေးခှနျး နံပါတျ (8)(a) ရဲ့ နံပါတျ (၂) က ကလေးတှေ အတှကျအရမျးလှယျတဲ့ ဟာမြိုးဖွဈပမေယျ့ အပျေါက နှဈမှတျတနျ မရတော့ တခွား ခကျတဲ့ အပုဒျတှကေို ရှေးဖွတေော့ ကလေးတှေ မှာလညျး နဈနာမှုတှေ အမြားကွီးရှိတယျ “ လို့ ဓါတုဗဒေ ဘာသာရပျ ဆရာဦးအောငျအောငျ က ပွောပါတယျ။
အခု ၂၀၁၈ ခုနှဈရဲ့ ဓါတုဗဒေ မေးခှနျးက ပွီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၄ ခုနှဈ က တက်ကသိုလျဝငျတနျး စာမေးပှဲမှာ ရခိုငျပွညျနယျမှာ မေးခဲ့တဲ့ ဓါတုဗဒေ မေးခှနျး နဲ့ အားလုံးထပျတူနီးပါး တူညီနတေယျလို့ လညျး သိရပါတယျ။
အဲဒီလို ၂၀၁၄ ခုနှဈ မှာ မေးခဲ့တဲ့ ဓါတု ဗဒေ မေးခှနျး (ရခိုငျပွညျနယျ) နဲ့ အားလုံးနီးပါး တူညီမှု ရှိနတော နဲ့ ပတျသတျပွီး ဝဖေနျမှုတှေ လညျး ရှိနပေါတယျ။
ဒါ့အပွငျ မှား၊ မှနျ မေးခှနျးတှမှောလညျး ပယျဖကျြပွီးသား သငျခနျးစာတှထေဲကနေ မေးထားတာ မြိုးတှေ ပါဝငျနတေယျလို့ သိရပါတယျ။
“ ပယျပွီးသားသငျခနျးစာကတော့ လုံးဝ မမေးသငျ့ပါဘူး၊ ပွီးတော့ ဒီမေးခှနျးက ၂၀၁၄ ရခိုငျမေးခှနျးနဲ့ လညျး တဈထပျတညျးနီးပါး ဖွဈနတေယျ၊ တဈမှတျတနျ (၁) ပုဒျ ခြိနျး ထားတယျ၊ (၂) မှတျတနျ တခြို့ ခြိနျးတယျ၊ (၈) မှတျတနျ မှာ ထုတျဖျောပုံ တဈပုဒျ ခြိနျးထားတယျ အဲဒါလေးပဲ ကှာတယျ၊ ကနျြတာ အားလုံး တဈထပျတညျး မေးထားတာပါ ၊ ဒါလညျး မဖွဈသငျ့ပါဘူး နိုငျငံတျော အဆငျ့ မေးခှနျးကို ဒီလို တဈထပျတညျးကူးထားတာက ရုပျဆိုးလှနျးပါတယျ “ လို့ ဓါတုဗဒေ ဘာသာရပျ သီးသနျ့ စာသငျဝိုငျး သငျကွားပေးတဲ့ ဆရာ ဦးသူရအောငျ က မှတျခကျြပွုပါတယျ။
ဒီနေ့ ဓါတုဗဒေ ဘာသာရပျ ဖွဆေိုပွီးခြိနျ အထိ မွနျမာ တဈနိုငျငံလုံး အတိုငျးအတာအရ ကြောငျးသားကြောငျးသူ ဦးရေ စုစုပေါငျး (၆၉၄၃၇၁) ဦး ရှိတယျ လို့ မွနျမာ နိုငျငံ စာစဈဦးစီးဌာန က ရရှိတဲ့ စာရငျးတှေ အရ သိရပါတယျ။
* ဒီနဖွေ့တေဲ့ တက်ကသိုလျဝငျတနျး ဓာတုဗဒေမေးခှနျးမှာ
curve” Definition (2)မြိုးဟာ သငျရိုးသဈမှာ မပါတော့ပါ။
* သငျရိုးဟောငျးစာအုပျ စာမကျြနှာ (242) (13.7) က ပွဋ်ဌာနျးစာတှပေါ။
* 2014 ရခိုငျပွညျနယျ မေးခှနျးက No. 8 (a)(i)( ii )
(8)မှတျဖိုးလုံး တဈလုံးမလှဲ ပွနျရေးပေးလိုကျခွငျးပါပဲ။
2015 ကစပွီး သငျရိုးတှပွေငျတယျဆိုတာတောငျ မသိတဲ့ပါမောက်ခမြိုးပါပဲ။
* ပယျထားပွီးသားဖွဈလို့ သငျရိုးသဈစာအုပျမှာ မမွငျဖူးတော့ဇဝဇေဝါဖွဈပွီး ကလေးက ပိုငျတဲ့ပုစ်ဆာကိုတောငျ မဖွရေဲတော့ဘူး။ ကလေးပေါငျးမြားစှာ နဈနာပါတယျ။
* တဈနိုငျငံလုံးအတှကျ အလုပျလုပျရာမှာ ဘာကွောငျ့ ဒီလောကျ ပေါ့ပကျြပကျြဖွဈရတာပါလဲ??
* ဘယျသူ့မှာ တာဝနျရှိပါသလဲ??
သားအိမ်ကင်ဆာကို ကုသပေးနိုင်တဲ့ သဘာဝဆေး (ရှားစောင်းလက်ပက်)
အကယ်ဒမီ ၃ ဆုရှင်မင်သမီး မိမိခိုင် – ထွန်းအိန္ဒြာဗို ကို ဦးကျော်ဟိန်း ဘာပြောလိုက်လို့လဲ…